Digniin Laga Soo Saaray Xaalada Ka Taagan Gobolka Tigreega - Wararka Maanta:...
Qeybo kamid ah gobolka waqooyi ee Itoobiya, ayaa qarka u saaran iney ka dilaacdo abaar, sida uu sheegtay Xoghayaha Qaramada Midoobay Antonio Gutterres.
Digniin uu soo saarey ayuu ku sheegay xoghayuhu in haatan ay xaaladda ay kasii dareyso un, haddii aanan la kordhin lacagta la yaboohayo, iyo fududeynta in gargaarku degdeg ku gaaro gobolkani waqooyi ee Tigreega.
Wuxuu intaa ku darey xoghayuhu in haatan tallaabooyinka la qaadayo dadweynaha iney ugga dhigan yihiin nolol iyo geeri. Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore ku celisay digniinta kusaabsan in macluushii 1984-tii dalkan ka dhacey, iney mar kale kusoo noqon karto.
Wararka Maanta : Sawirro: Dekedda Berbera oo dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay - Max...
Mark Lowcock, oo ah madaxa arrimaha bani’aadanimada ee Qaramada Midoobay, ayaa u sheegay BBC-da in boqolaal kun dad gaaraya ay kal horaba wajaheen xaalad abbaar gobolka Tigreega, kaasoo bilooyinkii u danbeysay ay ka socdeen dagaallo.
Gobolka Tigeega ayaa waxaa ka qarxey dagaal bishii November, 2020-kii, markii ciidamada Itoobiya ay ku qaadeen halkaasi weerar.
Dowladda Itoobiya ayaa go’aan satey iney xukunka ka tuurto xisbigii maamulayey gobolka ee TPLF, kadib markii ciidamada xisbigan ay weerareen saldhig military oo ay ku sugnaayeen ciidamo federal ah.
Toddobada bilood ee uu dagaalkan socdo wuxuu u geystay khasaaro balaaran dhanka wax soo saarka cuntada.
Related Topics:digniinGobolkaLagaliverpool wararkamaantaraadreeb.com wararka maantasaaraysootaaganTigreegaWararkawarqaad wararkaxaalada
Washington oo Xayiraado Dhanka Socdaalka Ku soo Rogeysa Saraakiil Reer…
Wararka Maanta : Dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab oo lagu dilay gobolka Sh/hoose